प्रियंका चोपडाको नेपाली फिल्मको ट्रेलर रिलिज ! – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
प्रियंका चोपडाको नेपाली फिल्मको ट्रेलर रिलिज !
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले पहिलो पटक निर्माण गरेको नेपाली फिल्म ‘पाहुना : द लिटिल भिजिटर्स’ को अफिसियल ट्रेलर लञ्च भएको छ । नेपाली भाषामा अंग्रेजी सबटाइटल राखेर ट्रेलर तयार पारिएको छ । पाखी ए टायरवाला निर्देशित फिल्म ७ डिसेम्बर, २०१८ (मंसिर २१) मा रिलिज हुँदैछ ।
सार्वजनिक भएको ट्रेलरमा आमा बुवाबाट बिछोडिएका दुई बालबालिकाको कथा देखाइएको छ । ट्रेलरमा दिदी र दाइले भाइको सुरक्षाका लागि के–के गरेका छन् भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ ।
प्रियंकाको आफ्नै कम्पनि पर्पल पेबल पिक्चर्स कम्पनीले पछिल्लो समय भारतका क्षेत्रिय भाषाका सिनेमा निर्माण गरिरहेको छ । क्षेत्रिय भाषाका सिनेमा निर्माणलाई बढावा दिने योजना अन्तरगत उनको कम्पनीले नेपाली भाषामा ‘पाहुना’ निर्माण गरेको हो।
नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री जसलाई करोडौंको गाडी चाहिदैन:
सोलारबाट २७५ मेगावाट बिजुली: मुस्ताङ र रसुवामा
टिपरको ठक्करबाट एकको मृत्यु: प्रहरीले चालकलाई भगाएको स्थानीयको भनाइ